सम्पादकीय – Samabeshi Khabar
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:२११९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:२११९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:२१ by Samabeshi KhabarNo Comments
महिलाहरुले अनुहारको अनावश्यक रौं फाल्न उपनाउने घरेलु उपाय
प्रमुख समाचार, सम्पादकीय
काठमाडौं, (ससं) । के तपाइमा पनि समस्या तँ यस्तो समस्या भएको छैन ?अनिच्छित रौं पलाउने समस्या महिला वा युवतीमा मात्रै नभएर सबै युवकहरु पनि पीडित भएको पाइन्छ । कतिपय महिला तथा किशोरीको अनुहारमा जुगाँको रेखा प्रष्टै देखिन्छ । यी रौं पुरुषको दाह्रि जुगाँ जस्तो लामो नभएपनि महिलाको अनुहारमा यसरी अनावश्यक रौं पलाउनु अप्राक्रृतिक तथा अस्वभाविक देखिन्छ । धैरैजसो महिलाको शरीरमा असामान्य ठाँउहरुमा जस्तै अनुहारमा दाह्रि(जुँगा देखिनु, स्त नकोनिप्पल वरिपरी रौं पलाउने, हातखुट्टामा अनावश्यक भुत्ला देखिने । यस समस्याबाट पीडित महिला, युवतीहरु शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक रुपले पनि पीडित भइरहेका हुन्छन् । यसरी महिलाको अनुहारमा पुरुषको जस्तो दाह्रि-जुँगा पलाउनुलाई चिकित्सकीय भाषामा (हर्सुटिज्म) भनिन्छ । यस किसिमको समस्याबाट प्रायस् एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका महिला एवं युवतीहरु बढी पीडित भएको देखिन्छन् ।...
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१८१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१८१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१८ by Samabeshi KhabarNo Comments
भेटियो लेडी गागाको हराएका कुकुर
काठमाडौं, (ससं) । हलिउड नायिका तथा चर्चित गायिका लेडी गागाको घर बाहिर हमला गरेर चोरिएको कुकुर भेटिएका छन् । लस एन्जलस प्रहरीले एक महिलाले लेडी गागाको दुबै कुकुरलाई ओलम्पिक कम्युनिटी पुलिस स्टेशनमा लिएर आएको जानकारी दिएको हो । हराएका कुकुरको नाम कोजी र गुस्ताव थियो । त्यसपछि प्रहरीले लेडी गागाका प्रवक्तालाई बोलाएर हराएको कुकुरबारे पुष्टि गरे । यद्यपि, लेडी गागाको कुकुर कुनै उद्देश्यले चोरिएको थियो र ती महिलासँग कसरी आइपुग्यो भनेर केही जानकारी छैन । प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको छ ।...
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १३:५९१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १३:५९१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १३:५९ by Samabeshi KhabarNo Comments
यी सेलिब्रिटीको चोरी भयो कुकुर, भेट्टाउने लाई ५ करोड इनाम दिने
काठमाडौं, (ससं) । हलिउड नायिका तथा चर्चित गायिका लेडी गागाको घर बाहिर हमला भएको छ । लस एन्जलसमा लेडी गागाको कुकुर घुमाउने व्यक्ति रायन फिशरमाथि एक व्यक्तिले गोली हानी लेडी गागाका दुई फ्रेन्च बुलडग्स चोरी गरेका छन् । रायनलाई यो हमलापछि अस्पताल लगिएको छ जहाँ उनको स्थिती स्थिर बताइएको छ । लस एन्जेलस प्रहरी विभागले एक व्यक्तिलाई राती १० बजे आसपास गोली हानिएको जानकारी दियो । प्रहरीका अनुसार गोली हान्ने व्यक्तिले त्यसपछि दुई फ्रेन्च बुलडग्सलाई आफ्नो सेडान गाडीमा लिएर गए । रिपोर्टका अनुसार यी हमलाकर्ताले सेमी अटोमेटिक ह्यान्डगन प्रयोग गरेका थिए । गागाका प्रवक्ताले उनका दुई बुल डग कोजी र गुस्ताव हराइरहेको पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि, लेडी गागाको तेस्रो कुकुर यो हमलाका बेला त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको थियो र यसलाई प्रहरीले गागा भएठाउँ फिर्ता पठाइदिएको छ । गागाले कुकुर खोजेर ल्याइदिने व्यक्तिलाई इनाम स...
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:०३१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:०३१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:०३ by Samabeshi KhabarNo Comments
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्चित हलिउड अभिनेत्री जेनिफरले गरिन् तारिफ
काठमाडौं, (ससं) । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्चित हलिउड अभिनेत्री जेनिफर जोहाना एनेस्टेनले तारिफ गरेकी छन् । गत शुक्रवार उनले इन्टाग्राममा एक ‘स्टोरी’ अपडेट गरिन् । त्यस स्टोरीमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल, न्युजल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्याकिन्डा आर्डेन र नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीको फोटो राख्दै उनले लेखेकी छन्, ‘विश्वमा परिवर्तन नचाहनेहरूले हल्ला गरिरहेका बेलामा पनि परिवर्तन सम्भव छ ।’ उनको संकेत थियो, महिलाहरू अघि बढेको हेर्न नचाहनेका बीच पनि यी महिलाहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् र देशको नेतृत्व गरिरहेका छन्...
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:२४१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:२४१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:२४ by Samabeshi KhabarNo Comments
‘युरोरडिस फोटो अवार्ड २०२१’ मा नेपाललाई दोस्रो स्थान
प्रमुख समाचार, ब्यानर, सम्पादकीय
काठमाडौं, (ससं) । युरोरडिस फोटो अवार्ड २०२१’ मा नेपालले दोस्रो स्थान गर्न सफल भएको छ। दुर्लभ रोग लागेर जीवन बिताउन बाध्य व्यक्तिको जीवन शैलीलाई उजागार गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजित अन्तरर्राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगितामा पोखराका खिमकाजी लामिछाने दोस्रो भएका हुन्। गएराति बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको अन्तिम प्रतियोगितामा उनले दोस्रो स्थान हासिल गरेका हुन्। विभिन्न ३० मुलुकका चार सय भन्दा बढी फोटोपत्रकारले खिचेका दुई हजार ७३ फोटो प्रतियोगितामा समावेश भएको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा स्लोभाकिया प्रथम र आइसल्याण्ड तृतीय भएका थिए। सजिलै हाड भाँचिने रोगबाट पीडित आफ्नै छोरा अनिमेसलाई दुर्गा केसी ह्विलचियरका सहायताले विद्यालय पुर्‍याउँदै गरेको फोटो लामिछानेले प्रतियोगिताका लागि पठाएका थिए। एघार वर्षीय छोरा अनिमेसको अहिलेसम्म ४० पटक हाड भाँच्चिसकेको बताइएको छ। ओआईबाट ग्रसित भई हिँड्डुल गर्न नसके पनि पढ्ने इच...
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १७:२५११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १७:२५११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १७:२५ by Samabeshi KhabarNo Comments
सिओल, (ससं) । प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु) दक्षिण कोरियाले ईपीएस कार्यालय नेपालको लोगो तथा ठेगाना दुरुपयोग गरी अवैध रुपमा सञ्चालित फेसबुक पेजलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित कार्यालयसँग अनुरोध गरेको छ। युनियनले आज एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै त्यस किसिमका भ्रामक गतिविधि गर्नेगरी आफ्नो परिचय लुकाएर कार्यालयको ठेगानामा सञ्चालित पेजहरुलाई कानुनी कारवाहीका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड, ईपिएस नेपाल ग्वार्को शाखाको ठेगाना तथा फोन नम्बरसमेत उल्लेख गरी खोलिएका फेसबुक पेजहरुमार्फत युनियनका विषयमा कपोल्कल्पित टिप्पणी गर्ने र युनियनका गतिविधिका विषयमा तथ्यहिन भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कानूनी घेरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। कोरिया सरकारले यहाँ विदेशी श्रमिक ल्याउन आनाकानी गर्नुको मुख्य जिम्मेवार एमटियु कोरिया भएको आरोपसहित ती पेजहरुमा निराधारा र ...
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार १३:४८२ फाल्गुन २०७७, आईतवार १३:४८२ फाल्गुन २०७७, आईतवार १३:४८ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी नायिका सुष्मा कार्कीको आज जन्मदिन परेको छ। १९८५ फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन उनको जन्म भएको थियो। बर्दिया जिल्लामा जन्मिएकी सुष्माको पहिलो फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्। मोडलिङ्ग हुँदै चलचित्रमा लागेकी उनले दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन्। चलचित्र क्षेत्रमा भने उनलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गराएका थिए। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुष्मालाई हक्की र निडर नायिकाको रूपमा समेत चिनिने गरिन्छ। यस कारण उनी बेलाबेला विभिन्न कारणले विवादमा आइरहन्छिन्। हालसालै मात्र उनले आफू माथि काठमाडौंको लन्डन पबमा नायिका स्वेता खड्काकी बहिनी पत्रकार उत्सव रसाइलीले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिईन। यद्यपी उनीहरुले सुष्मासंग माफी माग्दै विवाद सुल्झाएको बताएपनि अहिले आएर श्वेता...
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:१२२८ माघ २०७७, बुधबार १३:१२२८ माघ २०७७, बुधबार १३:१२ by Samabeshi KhabarNo Comments
इन्डोनेसियामा रगतजस्तै बाढिले डुब्यो गाउँ !
काठमाडौं, (ससं) । इन्डोनेसियाको एउटा गाउँमा केही दिनअघि अनौठो बाढी आएको थियो । त्यो बाढीको पानी धमिलो थिएन बरू रगत मिसिएजस्तो रातो थियो । जाभा प्रान्तमा पर्ने जेंगगट गाउँका सडक र अरू संरचना रातो पानीले डुबेपछि मानिसहरू आश्चार्यमा परे । यस्तो पानी कहाँबाट आयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै चर्चा भयो । पछि थाहा भयो बाढीको पानी सबैभन्दा पहिला कपडामा रङ लगाउने एउटा फ्याक्ट्रीमा पसेको रैछ । त्यही पानी गाउँमा चारैतिर फैलियो अनि सबै पानी राताम्ये भयो । यो गाउँ परम्परागत र आधुनिक डाइका लागि प्रसिद्ध छ । यसअघि पनि उक्त गाउँका नदीमा पानीको रङ बदलिने गथ्र्यो । गत महिना एउटा अर्को गाउँमा नदीको पानी हरियो भएको थियो । इन्डोनेसियाका धेरै भू–भाग वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्ने गर्छन् । एजेन्सी...
८ पुष २०७७, बुधबार १५:३६८ पुष २०७७, बुधबार १५:३६८ पुष २०७७, बुधबार १५:३६ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, पुस ८ (ससं) । छालाको सेवासियस भनिने तेल ग्रन्थीमा व्याक्टेरियाको संक्रमणमा भएपछि फुल्ने र पिप जम्मा हुने अवस्थालाई हामी डण्डिफोर निस्केको भन्छौँ । तेल ग्रन्थीले अनावश्यक रुपमा धेरै तेल उत्पादन गर्नु नै डन्डिफोरको मुख्य कारण हो । डण्डिफोर खासगरी अनुहार घाटी काँध तथा ढाडमा हुनेगर्छ । डण्डिफोर स्वास्थ्यका लागि भयंकर समस्या मानिदैन यद्धपी यसको आगमनले मानिसको आकर्षणमा चिसो पना पैदा गर्छ । अनुहारमा देखिने डण्डिफोले अनुहारको चमक नै हराइदिन्छ । त्यसैले कतिपय युवायुवतीहरु आफ्नो अनुहारमा निस्केको डण्डिफोर प्रति निकै नै चिन्तित हुने गर्छन । डण्डिफोर हटाउन बजारमा धेरै क्रिम तथा औषधिहरु पाइन्छ, तर हामी यसपटक यहाँलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेका बस्तुहरुको प्रयोगबाट डण्डिफोर हटाउने घरेलु उपायबारे जानकारी दिन्छौँ । ती उपायहरु यसप्रकार छन् । १. बरफ बरफलाई कपडाले छोपेर डण्डिफोर भएको ठाँउम...
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १४:५५१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १४:५५१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १४:५५ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, १९ मंसिर (ससं) । कपाल लामो बनाउन सबैलाई मनपर्छ । सबैलाई आफ्नो कपाल लामो र सुन्दर होस् भन्ने इच्छा हुन्छ । यसका लागि विभिन्न रसायन मिसाइएका सौन्दर्य प्रशाधन प्रयोग गरिन्छन् । रसायनका कारण कपाल बिग्रने गर्छ । कपाल लामो बनाउने घरेलु उपायहरुमा निम्न छनः प्याजको रस प्याजमा भएको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण गर्छ । यसले कपाललाई बलियो बनाउँछ । प्याजमा भएको एन्टिब्याक्टेरियल गुणका कारण प्याजको रस कपालमा लगाउनाले झर्ने समस्या कम हुन्छ । कपाललाई चमकदार, स्वस्थ र लामो बनाउन प्याजको रसबाट बनेको हेयर प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्याजको रस निचोरेर टाउकामा लगाएर २५–३० मिनेट त्यत्तिकै छाडिनु पर्छ । त्यसपछि स्याम्पूले राम्ररी कपाल सफा गर्नुपर्छ । प्याज र बियर बियरले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा चमकदार बनाउँछ । प्याजको रसलाई बियरमा मिसाएर कपालमा लगाउनाले कपाल बढ्छ । यसले कपालमा कन्डिसनरको पनि काम गर्छ...